Date My Pet » Ko Women Want muukama?
Ko Women Want muukama?
Last updated: Oct. 29 2020 | 2 Maminitsi verenga
Maererano kudzidza inoitwa 2012, 41% michato rokutanga, 60% wechipiri michato uye 73% wechitatu vanoroorana muUnited States kuguma nokurambana. Ava chaizvo zvinoshamisa uye dzinoratidza kuti varume nevakadzi vari US vari kutamburira kuti ukama here simba. Kuti ukama hwakasimba, vose vakaroorana vanofanira kunzwisisa zvido zvemumwe nemumwe zvakakwana. saka, heano zvimwe zvinhu vakadzi kutsvaka ukama.
rudo: Unogona kufunga munhu haafaniri kuva mukadzi kutsvaka rudo, asi isu kugona kufamba mberi pasina kutaura “rudo” sezvo vakadzi chete vanoda kunzwa tichidiwa. Hazvirevi kuti mukadzi anoda murume upenyu hwake kuti voruzhinji kuratidzwa rudo dzimwe nguva, asi akarurama anoda iye chinoreva rudo rwake kwaari zvakavanda kuburikidza nezviito uye nemashoko sezvo kazhinji sezvinobvira; neapo voruzhinji kuratidza rudo hakusi zvakaipa kana. saka, kana uri murume, kuramba hwakasimba mukadzi waunoda iwe unofanira kuramba achiyeuchidza naye sei unomuda kuburikidza nemashoko nezviito.
chibatiso: Rwendo upenyu hakusi nyore kuti munhu, pasinei munhurume, asi vakadzi rwendo kazhinji kunyange Yakaomarara. Avanotarisira kutarisana akasiyana kwakachengeteka nyaya dzinenge zvose kuburikidza upenyu hwavo, huru mugove uko chokuita zvepabonde kwavo.
Nokuti vakadzi vari US, kushungurudzwa hachisi chinhu sazivikanwa. A munyika kumiririrwa runhare tsvakurudzo nechokuita 612 vakadzi vakura inoitwa June, 2000 kwakaratidza kuti vanenge vose vakatarisana kushungurudzwa mumugwagwa pane imwe nguva muupenyu. Around 87% vakadzi American makore pakati 18 uye 64 akawanikwa kuva nekusangana achinetswa murume mutorwa makore.
Uyu mukuru fungidziro ndichiva kunetswa kunosiya vakadzi vanotya. saka, vanoda nomumwe vanogona kuvimba zvachose. Vakadzi vanoda chaizvo vamwe ndiani kuridza basa akakwana mudziviriri uye vanzwe vakachengeteka.
Sezvo murume kana kubudirira kuita wako anzwe akachengeteka, nokukurumidza uchaona yake yokutanga kwamuri zvose zvepabonde uye mupfungwa. Izvi vachangoerekana kuti chisungo pakati vaviri imi kunyange kusimba.
kusetsa: Humor Zvinokosha kuti vakadzi. Vakadzi nguva dzose tsvaka varume zvishoma pfungwa zvinosetsa i.e. varume vanogona kuvaita kuseka. Maererano tsvakurudzo kuitwa MarketTools Inc, 58% Vakadzi vanoda vavo kuti vave nepfungwa zvinosetsa. saka, murume kutsvaka nzira kuti dzake naye vafare uye kugutsikana vanofanira kuedza kuva kwake wittiest yakanakisisa.
rukudzo: Kunyange zvazvo tiri kutaura naro okupedzisira, ruremekedzo ari ndingangokuvara zvose chinhu chinonyanya kukosha kuva noukama nokuda vakawanda vokuAmerica. Ongororo kubudikidza MarketTools Inc kwakaratidza kuti 84% vakadzi vanofunga kuti ukama kubudirira, kuwana kuremekedza kubva shamwari Zvinokosha.
Unofanira kushamisika “Ko chitarisiko”? Ehe, vakadzi vanoda kuva varume vadyidzani avo dzinokwezva, asi ivo haitongovi mumwe wokutanga unhu kutsvaka munhu.
Nhanhatu Red Flags To patepi The First Date
5 Nhema Pamusoro Dating Kuti Munhu wese anofunga ndeechokwadi
Vari Your Online Social Profiles aparadze Relationships Your?
Nokuti Rudo ane Pet